Turpial 2.0 မှကျွန်ုပ်တို့အားဘာတွေယူဆောင်လာသည်။ + တိုးတက်မှုဗားရှင်းတပ်ဆင်ခြင်း | Linux မှ
Turpial 2.0 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆောင်ကျဉ်းပေးသောအရာ + ဖွံ့ဖြိုးမှုဗားရှင်းတပ်ဆင်ခြင်း
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ, NOTICIAS, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါတို့အဘို့ မိုက်ခရို အစဉ်မပြတ်ငါအသုံးပြုခဲ့သည် နေဖောက်သည်တစ် ဦး တူညီသော y တွစ်တာ ရေးသားခဲ့သည် Python ကို နှင့်အထူးသဖြင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် ကိုနိုင်း.
En Debian စစ်ဆေးခြင်း လက်ရှိသည် 1.6.7 ဗားရှင်း ဒီပေါ့ပါးသော application ၏, ဒါပေမယ့်၎င်း၏ developer များပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့မြင်လိမ့်မည်အရာကို preview ပေးပြီ Turpial 2.0.
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Turpial 2.0 အဓိက facelift ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ account ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ တူညီသော o တွစ်တာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ Layout layout သည်ယခုအချိန်တွင်သန့်ရှင်းပြီးအောက်ခြေရှိ action ခလုတ်များကိုပြောင်းထားသည်။
ဝီကီတွင် နေ ထုတ်လုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အကြံမပေးသောဖွံ့ဖြိုးရေးဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ပါအဆင့်များမှချန်ထားခဲ့သည်။ အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1 1.- libturpial Install လုပ်ပါ
2 libturpial update ကို 1.2-
3 2.- ငရုတ်ကောင်း
4 2.1- Turpial Installing
5 2.2- Turpial Update ကို
6 3.- အိုကေ၊ ငါတို့ Turpial ကို install လုပ်ပြီးပြီ။
1.- libturpial Install လုပ်ပါ
ဒါအတွက် terminal တစ်ခုဖွင့်တယ် (git-core ကို install လုပ်ရမယ်) ပြီးတော့ငါတို့ထားတယ်:
ဒါက folder ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ် .ရာဝတီ။ ပြီးရင်အဲဒါကိုသုံးမယ်။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် install လုပ်ပါ .ရာဝတီ အမြစ်အဖြစ်ရိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ mode မှာ (သို့မဟုတ် sudo သုံး၍):
libturpial update ကို 1.2-
အပြောင်းအလဲများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် command နှင့်မွမ်းမံနိုင်သည်။
နှင့် module ကို reinstall:
ကျနော်တို့ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ .ရာဝတီ ငါတို့ install နိုင်ပါတယ် နေ.
2.1- Turpial Installing
ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ဖန်တီး folder ကိုရိုက်ထည့်ပါ
နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုက်သည် နေ အမြစ်အဖြစ်ချပြီးဖွံ့ဖြိုးရေး mode မှာ (သို့မဟုတ် sudo သုံး၍):
ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကြောင့်စမ်းသပ်။ မရပါ။ 🙁
2.2- Turpial Update ကို
အပြောင်းအလဲများရှိပါက command နှင့် update လုပ်နိုင်သည်။
3.- အိုကေ၊ ငါတို့ Turpial ကို install လုပ်ပြီးပြီ။
ကွပ်မျက်ရန် နေ terminal ကိုထည့်တယ်
တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့စီမံခဲ့ရင်ငါ့ကိုသိပါစေ။ ဒီနေ့လည် I ငါကြိုးစားသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Turpial 2.0 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆောင်ကျဉ်းပေးသောအရာ + ဖွံ့ဖြိုးမှုဗားရှင်းတပ်ဆင်ခြင်း
wwow, gwibber ကို turpial ဖြင့်တိတ်တိတ်လေးအစားထိုးနိုင်သည်။ မှတ်စုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ, ငါ turpial မသိခဲ့ပါနှင့်ငါ gwibber နှင့်အတူအရဘယ်တော့မှ Mint အတွက် install လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည် Debian Squeeze တွင် Turpial 1.6.7-1 ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် 2.0 သည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်အားမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်မည်မျှပျော်ရွှင်ခဲ့သည်ကို you မသိပါ။
uros ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Turpial ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိရုံသာမကဘဲ xD ကိုနှစ်သက်သောကြောင့် (Cunaguaro နှင့်Guácharoကိုစမ်းသပ်သည်၊ Firefox နှင့် Thunderbird ၏မိတ္တူများသာဖြစ်သည်။ ) ။ ငါ 2.0 ကြည့်ပုံကိုကြိုက်တယ်, ငါကမျှော်လင့်နေပါတယ်။
Carlos Guerrero နေရာယူပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
အဆင့် ၂.၂ - Update Turpial တွင်အမှားတစ်ခုရှိသည်
ဒါဟာ git ဆွဲမူလအစမာစတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်:
Carlos Guerrero ကိုပြန်သွားပါ
GTK အစား QT စာကြည့်တိုက်များဖြင့်လည်ပတ်ရန်။
MacOSX ပေါ်မှာစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် executable ဆိုတာဒီမှာပါ။
WTF !!! Turpial သို့သော် GTK အစား O ... O_O အစား Qt သည်မည်မျှသွေးဆောင်မှု dam
ဟဲဟဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... Elav Turpial မှ 2.0 ကို download လုပ်ပြီးပြီလား။ (အနည်းဆုံးတစ် ဦး alpha သို့မဟုတ် beta ကို?), ငါ hehe ကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။
ငါ Wheezy တွင် KDE4 နှင့်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ယခင် Turpial ဗားရှင်းရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive အတွက်အဆိုးဆုံး